Budata Taxi Simulator 2018 APK maka Android
Budata Taxi Simulator 2018
Free Budata maka Android (341.00 MB)
Budata Taxi Simulator 2018,
Taxi Simulator 2018 bụ egwuregwu simulator kacha mma ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gam akporo gị. Mmepụta, nke dị elu karịa egwuregwu ịme anwansị tagzi ọzọ na eserese na egwuregwu, Zuuks Games mepụtara, nke anyị maara na Truck Simulator 2017 na egwuregwu ịnya ụgbọ ala.
Anyị nwere ike ịnya tagzi 8 dị iche iche na egwuregwu ịme anwansị tagzi nke na -abịa na nkwado asụsụ English. Nezie, anyị na -awagharị nobodo, na -eburu ndị njem, na -eburu ha ebe ọ bụla ha chọrọ ma na -enweta ego anyị, mana anyị anaghị akpagharị nefu. Anyị nwere ihe karịrị 250 isi iji wuchaa. Ebe egwuregwu a dị nasụsụ English, echere m na ị nwere ike mezue isi ya ngwa ngwa.
Anyị nwere ohere ịsọ mpi na ndị egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu ịme anwansị, ebe ọ bụghị naanị tagzi kamakwa ndị njem na ụdị obodo dị mma. Inwe ezigbo usoro okporo ụzọ na-eme ka ihe ịma aka sie ike.
Taxi Simulator 2018 Ụdịdị
Nha faịlụ: 341.00 MB